१२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट : होला त विकास र सबल नेपालको सपना पुरा ? लाईभ – Mission Khabar
१२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट : होला त विकास र सबल नेपालको सपना पुरा ? लाईभ
मिसन खबर १५ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ११:२७
काठमाडौं, जेठ । आगामी आर्थिक बर्ष २०७५\_०७६ का लागि सरकारले १२ खर्ब ७८ अर्बको बजेट ल्याएको छ । आशा लाग्दा विकासे घोषणा र प्रतिवद्धता सहितको बजेट संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका हनु । कर्मचारीको तलब बृद्धि नगरेको बजेटले एक हजार भत्ताको व्यवस्था गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनबाट ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले ५ लाख जनाले रोजगारी पाउने र मूल्यवृद्धि ५ प्रतिशतमा सीमित हुने दाबी गरेको छ ।
चालू आवमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको सरकारले ५.९ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल हुने प्रक्षेपण अर्थ मन्त्रालयको छ ।
बेरोजगारी समस्या अन्त्यका लागि सरकारले बजेट मार्फत प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको छ । सबैभन्दा बढी शिक्षा क्षेत्रमा बजेट निकासा हुँदैगर्दा कृषी, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पनि बजेट बृद्धि गरिएको छ ।
शैक्षिक प्रमाण पत्रका आधारमा ७ लाखसम्म ऋण दिइने, कुम्बासीलाई पहिलो पटक आभाष, बृद्धभत्ता नबढाएको सरकारले बजेटमार्फत बृद्धृबृद्धाको एक लाख बराबरको बिमामा सहयोग गर्नेछ । यस्तै, बजेटले जलमार्ग र रेलमार्ग महत्वका साथ अघि बढाउने महत्वकाक्षी योजना सहित बजेट बिनियोजन भएको छ । डिपिआर र अध्यययनका लागि बजेट छुट्टाएको सरकारले केवलकार, मोनोरेलको अध्ययनलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । सुरुङमार्ग, मदनभण्डारी राजमार्ग लगायतका सडक परियोजना, तराईका छानोमुनी रहेकालाई जस्तापाता वितरणमा सरकारले सहयोग गर्ने भएको छ ।